गिद्धको संरक्षण शुरु, जटायु रेष्टुराँको समेत व्यवस्थापन ! - Seto Khabar गिद्धको संरक्षण शुरु, जटायु रेष्टुराँको समेत व्यवस्थापन ! - Seto Khabar
गिद्धको संरक्षण शुरु, जटायु रेष्टुराँको समेत व्यवस्थापन !
March 13, 2018 सेतो खबर
नवलपरासी, फागुन २९। गिद्ध संरक्षणका लागि नवलपरासी बर्दघाट– सुस्ता पूर्व जिल्लामा गिद्ध संरक्षणका अभियान चलाइएको छ । कावासोती नगरपालिका–८ मा गिद्धलाई आहार जुटाउनका लागि जटायु रेष्टुराँ नाम नै राखी गिद्ध संरक्षण गरिँदै आएको छ । युएनडिपीको स्मल ग्रान्ट्स प्रोग्राम एसजिपीले आर्थिक सहयोग गरेपछि यसरी गिद्धको संरक्षण शुरु भएको जटायु रेष्टुराँ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दानबहादुर चौधरी बताए ।
शुरुमा ७२ गिद्ध रहेको सो स्थानमा हाल एसजिपीको सहयोगमा गाउँले संरक्षणमा लागेपछि २१७ सम्म गिद्ध गणना गरिएको चौधरीले जानकारी दिए । हाल त्यहाँ पर्यटकको आवागमन पनि बढेको छ ।
पर्यटकले गिद्धको अध्ययन गर्नाका साथै जिप सफारी गरेर घाँसे मैदान, गैँडा, हात्ती, बाघलगायत जंगली जनावर हेरेर रमाउने गर्छन् । गिद्धको अध्ययन गर्नकै लागि भनेर जीवशास्त्रका विदेशी विद्यार्थी पनि यहाँ आउने गरेका छन् । रासस